Kushambadzira Zviitiko, Misangano uye Webinars | Martech Zone
Misangano ichauya, misangano chaiyo, webinar uye zvimwe zviitiko zvekushambadzira zvinofadza pa Martech Zone
Salesforce Dreamforce yadzoka uye ichange ichishanda musangano wezuva rimwe kubva kuNew York City. Chiitiko chaicho neSalesforce, Salesforce Partners, uye Salesforce vatengi chichasanganisira: Zvinokurudzira zvinoratidzwa kubva kune vanochinja vanhasi Chigadzirwa spotlights Trailblazer sei-kubva kuTrailhead Luminary speaker Networking neTrailblazers kubva pasirese Chiitiko chemumhanzi chinoshamisa. Kuve chiitiko chaicho, chero munhu anogona kunyoresa uye kujoinha kubva chero kupi nekubatanidza. Pachave nevatauri vatsva, zvakasarudzika, uye zvimwe zvinoshamisa
Chipiri, May 12, 2020 Chipiri, May 12, 2020 Douglas Karr
Hapana mubvunzo kuti indasitiri yekutengesa yakapwanywa nedenda reCOPVID-19. Sevatengi veKushambadzira Cloud, zvakadaro, iwe une mikana iyo vako vanokwikwidza vasingaiti. Denda racho rakurudzira kutorwa nedhijitari uye hunhu ihwo hucharamba huchikura hupfumi pahunopora. Mune ino webinar, isu tichaenda kupa matatu akapamhama matekiniki uye gumi nemaviri matanho akanangana navo kuti sangano rako rinofanira kukoshesa nhasi - kwete kungopona dambudziko iri asi kubudirira